Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A June 2011 (4)
Q and A June 2011 (4)
1. လည်ပင်းကလည်း တော်တော့်ကို နာနေတုန်းပါပဲ
2. တူမလေး ချောင်းဆိုးနေတာ ၃ ၇က်ခန့် ရှိပါပြီ
3. အစာအိမ်ကင်ဆာနဲ့ပါတ်သက်လို့ မေးချင်ပါတယ်
4. အကိုကြီးသည် အသည်းတွင် အလုံးတွေ့သဖြင့်
5. သူ့ရင်သားတွေဟာ အပျိုဖြစ်ပြီးကတည်းက
6. သားကြောဖြတ်ထားတော့ ဘယ်လို ထပ်ယူရင် ရနိုင်မလဲ
7. ဆီးခုံအောက် ညာဘက်နားမှာ အကြိတ်လို
8. အိမ်သာတက်တာ သွေးပါနေလို့
Q 1: ကျွန်တော့် အသက်က ၂၈ ထဲမှာပါ။ ဖျားနေတာ ၆ ရက်ရှိပါပြီ။ တောက်လျှောက်ကြီး ဖျားနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ပူလာလိုက် ပြန်အေးသွားလိုက်နဲ့ပါ။ ခေါင်းကတော့ အဲဒီနေ့ ကတည်းကစပြီး ခုထိ အလွန်အမင်းကို မခံနိုင်အောင် ကိုက်ပါတယ်။ နားရွက်အောက်နားက ပါးစောင်ရိုးဘေးနား လည်ပင်းကလည်း ထိလိုက်ရင် နာနေပြီး တစ်ခုခု မျိုချရင်လည်း နာနေပါတယ်။ အာသီးတော့ ဖြစ်မယ် မထင်ပါ။ အာသီး ခဏခဏ ယောင်တတ်တော့ သိပါတယ်။ ခုက အာသီးနားက မဟုတ်ဘူး။ တနလာင်္နေ့ က (့) က ပိုလီ ဆေးခန်းသွားပြတော့ အပူချိန်က ၃၈့၁ ရှိပါတယ်။ Klerimed 500 (Clarithromycin 500MG Tab) နဲ့ Pain Killer ကျနော်က အစာအိမ်ရောဂါ ရှိတော့ Famotin (Famotidine USP 20mg) နဲ့ တစ်ပတ်စာ တွဲပေးပါတယ်။ ၂ ရက်လောက် သောက်ပြီး လုံးဝမသက်သာတာနဲ့ ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ ဆေးခန်းကို သွားပြပါတယ်။ Amoxicillin နဲ့ Decolgen ပေးပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေး ကိုတော့ မသောက်ရသေးပါ။ ပထမဆေးခန်းရဲ့courseကို ပြီးအောင် သောက်ရဦးမှာ မို့ပါ။ တစ်ခုမှ မသက်သာဘူး။ ခေါင်းကလည်း ဘယ်ညာ ရွှေ့ ရင်တောင် ဖြေးဖြေးချင်း ရွှေ့ရပါတယ်။ လည်ပင်းကလည်း တော်တော့်ကို နာနေတုန်းပါပဲ။ မြန်မာတွေ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဆားပြုတ်ရည် လည်း ငုံပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်း ရှိန်းရှိန်း ရှိန်းရှိန်းနဲ့ ပူနေပါတယ်။ အစားစာချင်စိတ်လည်း မရှိဘူး။
• Clarithromycin ဆေးက ဗက်တီးရီးယားတွေကို နိုင်တယ်။ Pneumonia နူမိုးနီးယား၊ Bronchitis လေပြွန်ရောင်၊ Infections of the ears, Sinuses, Skin, Throat နား-ဆိုင်းနပ်စ်-အရေပြား-လည်ချောင်း ရောင်တာတွေ အတွက် ကောင်းတယ်။
• Famotidine (Pepcid) ဆေးက Duodenal ulcer အစာအိမ်အထွက်နေရာ လေနာ၊ Gastric ulcer အစာအိမ်နာ၊ (GERD) အစာခြေရည် အထက်ဆန်တာတွေမှာ သုံးတယ်။
• Amoxicillin ဆေးကို ဗက်တီးရီးယား အမျိုးမျိုးအတွက် သုံးတယ်။ H. pylori ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အစာအိမ်လေနာ၊
• Infections of the ear, Nose, and Throat နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်းရောင်တာ၊ Infections of the genitourinary tract ဆီးလမ်း-မျိုးပွါးလမ်း ရောင်တာ၊ Infections of the skin အရေပြားရောင်-နာတာ၊ Infections of the lower respiratory tract အသက်ရှူလမ်း အောက်ပိုင်း ရောင်တာ၊ Gonorrhea ရိုးရိုး-ဂနိုးရီးယား၊ စတာတွေမှာ သုံးတယ်။
• ဖျားရင် ခံစားရတာတွေက တယောက်နဲ့ တယောက် မတူပါ။ နာတာကို ခံနိုင်ရည်လဲ ကွာကြသေးတယ်။ နာတာ သက်သာစေတဲ့ ဆေးကို မလွဲမသွေ သောက်ရမှာပါ။ လေနာဆေးနဲ့ တွဲသောက်တာ ကောင်းပါတယ်။
• ရောဂါ ရလာရင် ဆေးကနေ ရောဂါကို နိုင်အောင် အချိန်ယူရပါတယ်။ စိတ်ရှည်လိုက်ပါ။ ဆရာဝန် ၂ ဦးကိုလည်း ပြထားတာဘဲ။
• စားချင်စိတ်ပျက်တာလဲ ရောဂါကို ဆေးနဲ့ ခံနိုင်စွမ်းတွေက နိုင်လာတာနဲ့ ပြန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
Jun 3, 2011 at 9:55 AM
Q 2: ကျွန်တော့် တူမလေး ချောင်းဆိုးနေတာ ၃ ၇က်ခန့် ရှိပါပြီ။ အသက်ကတော့ ၁ နှစ် ၂ လ ရှိပါပြီ။ နှာစေးနေတာလည်း တပတ်ခန့် ရှိပါပြီ။ ဆရာဝန်ပေးထားတဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး Rhinathiol ကိုလည်း တိုက်နေပါတယ်။ မသက်သာသေးပါ။
• Rhinathiol5ml ထဲမှာ Carbocisteine 100 mg, promethazine HCl 2.5 mg ပါတယ်။ unproductive & irritative coughs သလိပ်မရှိတဲ့ ချောင်းခြောက်ဆိုးတာအတွက် ပေးတယ်။
• ချောင်းဆိုးတာက ရာသီဥတု၊ အနံ့အသက်၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဗက်တီးရီးယား စတာတွေကနေ ဖြစ်တယ်။ ဗက်တီးရီးယား ကြောင့် ဖြစ်တာ ဆိုရင်တော့ ပိုးသေဆေးနဲ့ပါ တွဲရတယ်။
• ကလေးငယ် ဒီအရွယ်မှာ ဆေးရွေးရတယ်။ ၂ ရက်နဲ့မှ မသက်သာရင် ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ပြပါ။
• လိုရမယ်ရ ဆေးနည်း ပြောရရင် Amoxacylin အရည်ပါတွဲရမယ်။ အာခေါင်-အာသီးရောင်တာနဲ့ အသက်ရှူလမ်း-အထက်ပိုင်း ရောင်တာအတွက် ၁ နှစ်သား ကလေးကို 50 mg/kg/day တနေ့ ၂-၃ ကြိမ် ခွဲတိုက်ပါ။
Jun 2, 2011 at 10:47 PM
Q 3: ကျွန်တော့် အမေရဲ့ အစာအိမ်ကင်ဆာနဲ့ပါတ်သက်လို့ မေးချင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ documents တွေကိုပါ attach လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမေက ပြီးခဲ့တဲ့လက အစာအိမ်ထုတ်ထားပါတယ်။ သိချင်တာက Chemo ဆေးတွေနဲ့ ပါတ်သက်လို့ လက်ရှိ အနေအထားကနေ Chemotherapy မလုပ်သင့်၊ လုပ်သင့် ဆရာ့ရဲ့အမြင်ကို သိချင်ပါတယ်။ ခွဲတဲ့ဆရာက လုပ်ပါ၊ မလုပ်နဲ့ အတင်းမတိုက်တွန်းပါ။ OT note ထဲကအတိုင်း ဆိုရင် လုပ်သင့်တယ်၊ စာထဲမှာပါတယ်ဘဲ ပြောပါတယ်။ သူခွဲခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေထဲမှာ တစ်ယောက်ကလည်း အမေ့လိုဘဲ ၇ဝ ကျော်ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်က ခွဲခဲ့တာ၊ Chemotherapy မလုပ်ဘဲ ဒီအတိုင်းနေတာ ခုထိ ကောင်းနေပါတယ်တဲ့။ Diagnosis လုပ်တဲ့ ဆရာမကတော့ အခု ဆေးမသွင်းသေးဘဲနဲနဲ fit ဖြစ်လာတော့မှ Chemo Pill ပေးမယ်ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆရာရေးတဲ့ `အစာအိမ်ကင်ဆာ´ဆေးစာကိုဖတ်ပြီးပါပြီ။ ကံတရားနဲ့ နောင်တကြားထဲမှာ မဝေခွဲနိုင်ပါ။ Side Effecta နဲတဲ့ ဆေးတွေတော့ လက်လှမ်းမှီပါတယ်။ ဆရာရဲ့အမြင်ကို သိချင်ပါတယ်။
• အစာအိမ်-ကင်ဆာ လူနာ အများစုကို Chemotherapy ဆေးပေးကုသမှု လုပ်တယ်။ ကင်ဆာ (ဆဲလ်) တွေကို သတ်ပြစ်ဘို့ပါ။
• မခွဲခင် ပေးတာရှိသလို ခွဲပြီးမှလဲ ပေးတယ်။
• အများအားဖြင့် သွေးပြန်ကြောထဲကနေ သွင်းပေးနည်းဖြစ်တယ်။
• ဆေး ၁ မျိုးထဲမကလဲ တွဲသုံးတယ်။
• အပြင်လူနာ၊ အတွင်းလူနာ အနေနဲ့ လုပ်နိုင်တယ်။
• ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးဆိုတာ ဆေးအမျိုးအစား နဲ့ ဆေး အနည်း-အများအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။
• ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို သေစေသလို မသေစေချင်တဲ့ အလျင်အမြန် ပွါးတတ်တဲ့ ဆဲလ်တွေကိုလဲ ထိခိုက်စေတယ်။
• သွေးဥတွေကို ပျက်စီးစေတာမို့ ရောဂါပိုး ဝင်လွယ်မယ်။ ထိခိုက်ရင် သွေးခြည်ဥတာ ပိုဖြစ်မယ်။ သွေးပိုထွက်မယ်။ မောပန်းပြီး အားကုန်သလို ခံစားရမယ်။
• အစားပျက်မယ်၊ ပျို့ချင်-အန်ချင်မယ်။ ဝမ်းပျက်မယ်။ ပါးစပ်မှာ အနာပေါက်မယ်။
• တချို့ဆေးတွေကြောင့် အရေပြားမှာ အနီပြင်ထွက်တယ်။ ခြေ-လက် ထုံကျင်နေမယ်။
• 5-fluorouracil နဲ့ Cisplatin ဆေးတွေကို အသုံးများတယ်။
• Paclitaxel, Docetaxel နဲ့ Irinotecan တွေလဲသုံးတယ်။
• ဆေးသစ်တွေကိုလဲ စမ်းသပ်နေတယ်။
• ရောဂါရဲ့ အလားအလာဟာ ဆေးကုတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲ ဆိုတာအပေါ် မူတည်တယ်။
• Localized distal gastric cancer ၅ဝ% ကျော်ကျော် ပျောက်သွားနိုင်တာက အကောင်းဆုံး အလားအလာ ဖြစ်တယ်။
• ကံမကောင်းတာက အမေရိကားမှာတောင် ၁ဝ-၂ဝ% လောက်သာ အဲဒီအဆင့်မှာ သိကြရတယ်။
• ကျန်တဲ့အဆင့်တွေဆိုရင် ၅ နှစ်နေနိုင်နှုန်းက
• ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မေးတဲ့သူရဲ့ မိခင်ကို Chemotherapy လုပ်ပါ-မလုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုခြင်း မရှိပါ။
o Disseminated disease တခြားဆီပြန့်နေသူ ဝ% ကနေ
o Localized distal gastric cancers confined to resectable regional disease နေရာလေး မှာသာရှိပြီး၊ ခွဲစိတ်ထုတ်လို့ရသူ ၅ဝ% ရှိတယ်။
o Proximal gastric cancer ဆိုရင် ၁ဝ-၁၅% ရှိတယ်။
• ကင်ဆာဆေးနဲ့အတူ လိုအပ်ရင် (ခွဲစိတ်လို့ အကုန်မထုတ်နိုင်ရင်) ဓါတ်ကင်တာလဲ လုပ်နိုင်တယ်။
• ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မေးတဲ့သူရဲ့ မိခင်ကို Chemotherapy လုပ်ပါ-မလုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုခြင်း မရှိပါ။ ကျန်းမာရေး သုတကိုသာ ပေးပါရစေ။
Jun 3, 2011 at 6:32 PM
Q 4: ကျွန်တော့် အကိုကြီးသည် အသည်းတွင် အလုံးတွေ့သဖြင့် 2.4.2011 နေ့က ခွဲလိုက်ပါသည်။ အသည်း ကင်ဆာ အဆင့်2ဟု ပြောပါသည်။ သည်းခြေအိတ်တွင်လဲ ကျောက်တည်သဖြင့် သည်းခြေအိတ် ထုတ်လိုက်ပါသည်။ ယခု2လ ကျော် လာသောအခါ အတ်ထာစောင်း ထပ်ရိုက်ရာ အသည်းတွင် အလုံးတစ်လုံး ထပ်တွေ့ပါသည်။ ဆရာဝန်က ပြောရာ ထပ်ခွဲဖို့ မသင့်တော်ဟု ပြောပါတယ်။ ဆေးဖြင့် ပိတ်လို့ရရင်ရ ဓါတ်ကင်လို့ရရင်ရ နောက်ဆုံးအဆင့် အသည်း လဲဖို့ ပြောပါတယ်။ အသည်း ကင်ဆာ ဒီလောက် မြန်မြန် အလုံး ပြန်ထွက်တက်ပါသလား။ ယခုအချိန်ထိ ခွဲတုန်းက ဗိုက်တွင် ပလတ်စတစ် ဗူးလေးဖြင့် ပိုက်တပ်ထားရာ အထဲက အရည်သည် သွေးရောင် အနှောက်ပြစ်ပြစ်တွေ ထွက်နေသဖြင့် မဖြုတ်ရသေးပါ။ အသည်း ကင်ဆာ အစားအသောက် နေထိုင်ပုံများ ရှိရင် တဆင့်ပို့ပေးရန် အကူအညီတောင်းပါတယ်။ ဆရာရေးသော ပို့စ်များကို လေ့လာဖတ်ပါတယ်။ အသည်းအကြောင်း ရေးထားသော ပို့စ်များကို တစ်စုထဲ တင်ထားသော နေရာ ရှိပါသလား။ အကိုကြီးသည် စီပိုး ဘီပိုးလဲ ရှိပါသည်။ နောက်ဆုံးသိလိုသည်မှာ ဆက်ကုလို့ အဆင်ပြေမပြေ သိချင်ပါသည်။ ယခု သူက တချက်တချက် အောင့်နေပါတယ်။
• အသဲ-ကင်ဆာဟာ ကင်ဆာထဲမှာ ဆိုးတဲ့ အမျိုးအစားထဲမှာ ထိပ်ကရှိတယ်။ ဆောရီး။
• ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံအရ ရောဂါအမည် တပ်ပြီးနောက် ၆ လ သာခံတယ်။ အတွေ့အကြုံဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ဝ နှစ်ကသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလတုံးက ဆေးတွေ၊ ဆေးအထောက်အကူတွေ၊ စမ်းသပ်နည်းတွေ အတော် နောက်ကျနေခဲ့တာပါ။ တိုင်းပြည် ကျန်းမာရေး အခြေအနေကလဲ အခု ပိုကောင်းနေ-မနေ အထဲကလူတွေက ပိုသိမှာပါ။ အသဲလဲတယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ မရှိသေးဘူး။ အခုဆို ကျွန်တော်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ကို လာပြီး အသဲ လာလဲနေသူတွေ တရက်မှ မပြတ်ရှိနေတယ်။
• ခွဲစိတ်အပြီး အရည်ထုတ်ပြွန်ကို ထွက်စရာကုန်မှ ဖြုတ်ပါမယ်။
• အစားအသောက်ကတော့ ခွဲစိတ်ပြီးရင် မေ့ဆေးလဲ ပျယ်ရင် စားနိုင်ပြီလို့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ညွှန်ရင် ရှောင်စရာ များများမရှိပါ။ အသဲဆိုတာ အဆိပ်အတောက် မှန်သမျှ ချေဖျက်ပေးတယ်။ အစားထဲကနဲ့ ဆေးဝါးထဲက မသင့်တာတွေကို ချေဖျက်တယ်။ ဆေးလိပ်-အရက်ကတော့ ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့။ ဆေးကိုလဲ ဆေးရုံက ညွှန်ရင် ကိစ္စမရှိပါ။ သည်းခြေအိတ်ပါ ဆက်နေတာမို့ ဆီ-အဆီကို နည်းစေရမယ်။
• နောက်အရေးကြီးတာ ပြောပါရစေ။ ဒီလိုမျိုး ဆိုးဝါးတဲ့ ဝေဒနာရှိသူတိုင်း ကံတရားနဲ့ စိတ်အားတွေကို အားကိုးသင့်ကြတယ်။ လူနာ စိတ်ချမ်းသာအောင်၊ စိတ်အားတက်အောင်၊ ကူညီသင့်ကြတယ်။ ကံတရား ဆိုတာတော့ ဆရာဝန်ကနေ တရားဟောစရာ မလိုလောက်ပါ။
• နောက်တချက် တိုင်းရင်းဆေး၊ မြန်မာဆေး စတာကို စမ်းရင် အသဲက အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်တာမို့ ဆေး-ဓါတ်စာ မပြင်းစေသင့်ပါ။
• ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ အသဲရောင် A, B, C, d, E တွေ ရေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော့် (ဘလောခ်) မှာ Search လုပ်လိုက်ရင် တွေ့မှာပါ။ အောက်ဆုံးမှာလဲ မာတိကာ ရှိပါတယ်။
Q 5: ကျမသမီးလေးက အသက်၂၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူ့ရင်သားတွေဟာ အပျိုဖြစ်ပြီးကတည်းက ထိမိကိုင်မိရင် အတော်လေး နာကျင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီတိုင်း မထိမကိုင်မိရင်တော့ ဘာမှ ထူးခြားမှု မရှိပါဘူး။ သူ့ဘာသာ စမ်းကြည့်တာတော့ အကျိတ် လုံးဝမတွေ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမဘက်က ကြီးဒေါ်၊ ဦးလေးနဲ့ အမေတွေက ကင်ဆာမျိုးစုံနဲ့ ဆုံးပါး ထားတော့ ကျမအတော် လန့်နေပါတယ်ရှင့်။
မိန်းကလေးတွေ ရာသီရက်အရ ရင်သားနာတတ်ကြတယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် မတူတတ်ပါ။ အလုံး-အကျိတ် စမ်းမရရင် ကောင်းပါတယ်။ သေချာအောင် စမ်းသပ်နည်းရေးထားတဲ့စာ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကင်ဆာ ဆိုတာ ဒီအရွယ်မှာ မဖြစ်သလောက်ပါ။ ဖြစ်နေရင်လဲ နာတယ်ဆိုတာ ရှားသေးပါတယ်။ အခံရခက်ရင် အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေး တခုခုကို သောက်နိုင်ပါတယ်။ လိုသေးရင် သူ့ကို သေချာမေးပြီး ဆရာ့ကို ပြန်မေးပါ။
Breast self examination ရင်သားအား မိမိဖါသာ စမ်းသပ်နည်း ကိုဖတ်စေပါ။
Q 6: ကျွန်မက အသက် ၃ဝ ရှိပါပြီရှင်။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ သားကြောဖြတ်ထားပါတယ်။ ရာသီလာတာ အရင်ထဲက တလကိုတခါ လာပေမယ့် အရမ်းနည်းပါတယ်။ ခုဆို ၂ လကိုမှ တခါလောက်လာပါတယ်။ စိုးရိမ်မိလို့ပါဆရာ။
1. အဲဒီလို ၂ လမှ တခါလောက်လာတာ စိုးရိမ်စရာကောင်းလား။
2. လတိုင်း ပုံမှန်လာအောင် ဘာဆေးသောက်ရမလဲ သိချင်လို့ပါ။
3. ကျွန်မတို့ သားသမီးတယောက် ထပ်ယူချင်လို့ပါ။ သားကြောဖြတ်ထားတော့ ဘယ်လို ထပ်ယူရင် ရနိုင်မလဲ သိချင်ပါတယ်။
၁။ ရာသီမမှန်တာ သက်သက်က စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ လိုအပ်ရင် OG ပြပါ။
၂။ ရာသီမှန်ချင်ရင် အလွယ်ဆုံးနည်းက ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲ ကိုယ်ဝန်တားဆေး သောက်ရမယ်။ ၃-၄ လ သောက်သင့်တယ်။ အဖြူပြားတွေ သောက်နေတုံး ရာသီမဆင်းဘဲ၊ ကုန်တာနဲ့ ဆင်းလိမ့်မယ်။
၃။ သားကြော ဖြတ်ပြီးသူ ကလေးပြန်လိုချင်တာ ခက်ခဲပါမယ်။ သားကြော ပြန်ဆက်နည်းလုပ်ဘို့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ အထူးလုပ်တဲ့ ဆေးရုံ-ဆရာဝန်ကသာ လုပ်မယ်။
၄။ တခြားနည်းက ပြင်ပမှာ ပေါင်းစပ်ပြီး သားအိမ်ထဲ ပြန်ထည့်ပေးနည်းလဲ လုပ်နိုင်တယ်။
Q 7: ကျွန်တော့် အသက်က ၂၄ နှစ်ပါ။ အခုနေထိုင်တာက (့) နိုင်ငံ (့) မြို့မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ ဆီးခုံအောက် ညာဘက်နားမှာ အကြိတ်လို အဖုလေးဖြစ်နေပါတယ်။ ဖြစ်တာကတော့ တစ်ပတ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ အရင် သေးသေးလေးကနေ အခု တစ်ဖြည်ဖြည်း ကြီးလာပါတယ်။ နာတော့ မနာပါဘူး။ အဲဒါ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။
ပေါင်ခြံထိပ်မှာလား၊ ဗိုက်နံရံမှာလား။ အရေပြားမှာ ကပ်နေသလား၊ အတွင်းထဲ ကျသလား။ ရွေ့လို့ ရသလား။ တခြား ဘာဖြစ်သေးလဲ။ အပေါ်ယံအရောင်က နဂိုအတိုင်းဘဲလား၊ နီသလား ပြာသလား။
Q 8: ကျနော် အိမ်သာတက်တာ သွေးပါနေလို့။ အိမ်သာ စသွားတဲ့အချိန်မှာ သွေးမပါပါဘူး။ တက်ပြီးတဲ့အချိန်ဆို သွေးတွေ ကျလာပါတယ်။ ဝမ်းလဲမချုပ်ပါဘူး။ သွေးတွေကျလာပေမဲ့ ဗိုက်ထဲမှာလဲ ဘယ်လိုမှ မနေပါဘူး။ နာလဲမနာပါဘူး။ တခါမှ မဖြစ်ဖူးတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဆေးခန်းသွားရမှာလဲ ရှက်နေလို့။ ဖြေကြားပေးပါ။ ကျွန်တော် အိမ်ထောင် မရှိပါဘူး။ ယောက်ျားလေးပါ။ အသက်က ၃ဝ ထဲမှာပါ။ (့) မှာနေပါတယ်။ ဖြစ်နေတာ နှစ်ရက်ရှိပါပြီ။
သွေးအရောင်က နီရဲသလား။ လိပ်ခေါင်းလို စအိုအဝမှာ အသားစလို စမ်းလို့ရသလား။ ဝမ်းသွားချိန်မှာ စမ်းလို့ရပြီး ပြန်ဝင်တတ်တယ်။ သွေး အနည်း-အများလဲ ပြောပါ။ တခြားနေရာ ဥပမာ သွားဖုံး၊ နှာခေါင်း စတာတွေကနေ သွေးယိုဘူးသလား။
စအိုဝမှာ အသားစ မထွက်ပါဘူး။ သွားဖုံး၊ နှာခေါင်း စတာတွေကနေ သွေးယိုထွက်တာမျိုးလဲ မဖြစ်ပါဘူး။ သွေးကတော့ ၃-၄ စက် လောက် ကျပါတယ်။ နီရဲနေပါတယ်။ မစင်နဲ့သွေး ဗလုံးဗထွေးထွက်တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ အလေးသွားပြီးမှ သွေးက follow လိုက်လာတာပါ။ ၃-၄ စက်လောက် ကျပြီး ဆက်မကျပါဘူး။
မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဝမ်း မမာ၊ မချုပ်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။ ရေအိမ်သာကိုသာ သုံးပါ။ ဗီတာမင် စီ ၅ဝဝ အား တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်ပါ။ အပူ-အစပ် လျှော့စားပါ။